တရုတ်မိတ်ကပ် Blender Brush, Blending Brush, Eyeshadow Blending Brush ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:မိတ်ကပ် Blender Brush,Brush ရောစပ်,Eyeshadow Blending Brush,Brush ရောနှောနေခြင်း,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျို Brush > Brush ရောနှောနေခြင်း
Brush ရောနှောနေခြင်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မိတ်ကပ် Blender Brush, Brush ရောစပ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Eyeshadow Blending Brush R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ပန်းရောင် Kakubi Lttle အမှုန့် Brush လူပျို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
gaot ဆံပင်တစ်ခုတည်းဖြီးအမှုန့်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားလက်ကိုင်စူပါဗာ Brush နှင့်အတူ Panda စံနမူနာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပန်းရောင် kakubi ဖြီးအမှုန့်နှင့်မျက်နှာဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Powder အကြီးစား Professional ကမျက်နှာ Brush ရောစပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၎င်းသည်သင်ဝယ်ယူမည့်အကောင်းဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောသိပ်သည်းမှု၊ ဤ Flat Top Kabuki Brush သည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည် Foundation Brush...
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ လှပပြီးစတိုင်လ်၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိခြင်း။ ပေါ့ပါးပြီးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီးစုတ်တံများသည်သိပ်သည်းပြီးပုံသဏ္shapedာန်ကောင်းမွန်သည်။...
ထုပ်ပိုး: အထုပ် customer`s လိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်။ OPP ပလပ်စတစ်အိတ်တစ်ဦးချင်းစီဖြီးဘို့အကြံပြုသည်။
Supply နိုင်ခြင်း: 200000 picecs/month
ယခုအသစ်ရေချိုးဖြီးအလွယ်တကူလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေရေချိုးခန်းယူအောင်, ခန္ဓာကိုယ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ရောက်ရှိကြောင်းရှည်သစ်သားလက်ကိုင်ရှိပါတယ်။ soft နှင့်အသားအရေ-ဖော်ရွေဒြပ်ဆံပင်, သင့်အသားအရေခြစ်ရာ,...
ပန်းရောင် kakubi ဖြီးအမှုန့်နှင့်မျက်နှာဖြီး
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့် use.Beautiful နှင့်စတိုင်; Superior quality.Feel အလင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တောက်ပမိတ်ကပ် finish ကိုဖန်တီးပါ။ တို့ထိရန်ပျော့ပျောင်းနှင့်တောက်ပခြင်း, စုတ်တံသိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပုံ well.Soft...
ဒီချစ်သောသူမိန်းကလေးသည် Ergonomics အလွန့်အလွန်ပျော့နဲ့ကြီးမားတဲ့ဦးခေါင်း,! ဤသည် thickened လူမီနီယံ ferrules anti-နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သစ်သား၏ထူးခြားသောချုပ်ကိုင်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်အတူမိတ်ကပ်လျှောက်ထားမှုအတွက် smoothest...
တရုတ်နိုင်ငံ Brush ရောနှောနေခြင်း ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် Brush ရောနှောနေခြင်း အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ မိတ်ကပ် Blender Brush,Brush ရောစပ်,Eyeshadow Blending Brush,Brush ရောနှောနေခြင်း,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် Brush ရောနှောနေခြင်း ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ Brush ရောနှောနေခြင်း အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် မိတ်ကပ် Blender Brush,Brush ရောစပ်,Eyeshadow Blending Brush,Brush ရောနှောနေခြင်း,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ Brush ရောနှောနေခြင်း အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
မိတ်ကပ် Blender Brush Brush ရောစပ် Eyeshadow Blending Brush Brush ရောနှောနေခြင်း မိတ်ကပ် Brush